Na dia efa niato ireo sidina iraisam-pirenena dia misy hatrany ireo fiaramanidina manokana tonga eny amin`ny seranam-piaramanidina Ivato maka ireo teratany vahiny mody an-tanindrazany. Noraofin’ny Amerikana ny olony izay mbola tavela teto Madagasikara. Fiaramanidina Boeing lehibe iray izay an’ny kaompania Kalitta Air no nigadona teny Ivato ary naka ireo mpandeha izay miisa 120, ny alin’ny alatsinainy teo. Tsy vao ity firenena ity irery no naka ny olony teto raha vao fantatra fa tonga ny coronavirus. Ny talata 31 martsa indray dia teratany Koreanina Tatsimo miisa 26 no nandao an’i Madagasikara. Nanofa fiaramanidina manokana ny ambasady Koreanina Tatsimo sy firenena vitsivitsy ka izay no nahafahan’ireo vahiny ireo niala teto raha ny fampitam-baovao nataon’ny ambasadin’i Korea Atsimo eto amintsika. Raha tsiahivina, ny 04 aprily izao dia hisy ihany koa sidina manokana avy amin` ny zotra Air France hitondra ireo Frantsay sy Eoropeana maniry ny hody any aminy. Raha ny fanadihadiana natao, mirohatra hamonjy io sidina io ireo teratany vahiny na dia natokana indrindra ho an` ireo vahiny nitsidika an` I Madagasikara aza izany. Teratany vahiny maro, indrindra ireo tomponà orinasa, anefa no tena manao famandrihana toerana faran’izay haingana. Misy moa ireo orinasa vahiny no tsy nampihatra ny “télé-travail” vao nanomboka ny fihibohana fa tsy nasaina niasa fotsiny ireo mpiasa . M.S, mpiasa aminà orinasa “call center” iray dia nanambara hoe “androany alakamisy (nldr: omaly) aho no nasain` ny orinasa iasako haka ireo fitaovana ilaina fa hiroso amin` ny télé-travail. Mahagaga izany, hoy izy, satria raha ny tetiandro nambaran` ny filoham-pirenena dia amin` ny 04 aprily izao no tokony ho tapitra ny fihibohana kanefa izao izahay vao nasaina niakatra fa hoe hanomboka ny télé-travail. Tsy voafaritra ny fotoana hiverenana miasa any am-piasana”. Raha jerena amin’ny fijery hafa dia efa ratsy ho an’izy ireo ny zava-misy eto amin’ny nosy matoa nalainy ny olony.